URolly Lambert Fogoum woyisa uJohn Napari eDubai kunye nevidiyo
24 EyeDwarha 2021
IBoxen247.com Iziphumo zomdlalo wamanqindi	Fogoum vs. Napari, UJohn Napari, Lambert vs. Napari, Uluhlu lweLolert Fogoum, URolly Lambert Fogoum vs. UJohn Napari, Ubuntshatsheli beWBO Afrika	0
Rolly Lambert Fogoum vs. John Napari Isiphumo
Conrad Dubai, Dubai, United Arab Emirates 23/10/21
I-Fogoum W TKO 6 Napari
Ubuntshatsheli beWBO Afrika
Phezolo (ngoMgqibelo we-23/10/21) e-Conrad Dubai, ubone ukubuya kwe-Cameroon cruiserweight u-Rolly Lambert Fogoum kumjikelo we-XNUMX, njengoko ebengquzulana nogxa wakhe waseGhana uJohn Napari. Lo mlo ibikukuqala kukaFogoum ukukhusela intshinga yeWBO Afrika ayiphumeleleyo kweyeSilimela, ngeKO edlala noPascal Abel Ndomba.
UFogoum wayenovavanyo olunzima eNapari owathi njengoko bekulindelekile kulo lonke ixesha lomdlalo wabetha amanqindi anzima kwaye weza kuphumelela kwibhidi ezimiseleyo yebhanti yengingqi yeWBO. Kwakungayi kuba njalo.
I-Fogoum yamelana nayo nayiphi na inkqubela evela eNapari, isebenzisa ngokufanelekileyo i-jab kunye nokulawula umgama, ifumana izithonga zakhe zamandla de ikona yeNapari yakhupha umlo wabo phakathi kwemijikelo 6-7.
Fogoum: “Ndijonge kulaa mlo ndilwe nomfo kanye njengoko bendilindele. Naxa wayendibetha, ndandisiva igalelo kwizithonga zakhe . Kodwa ndibambelele kwisicwangciso sam somdlalo, ndihlala ndizolile, ndiphumle, ndibetha, ndingayi okanye ndinqumle umsesane.
“Yayingumzuzu omnandi, ndaziva ndimnandi ukubalapho emva kwethuba.
“Ndanelisekile sisiphumo, ndimnqwenelela okuhle kodwa ngekamva lakhe kwaye ngokobuqu ndijonge phambili kwimicelimngeni emikhulu.”
okoko wafumana amanqaku akhe eyedwa kumdlalo wakhe wesine wobuchule,
UFogoum, ngoku 12-1-1, 11 KOs, ngoku uphumelele ishumi, ngelixa uNapari ephulukene okwesibini kuphela kumsebenzi wakhe wobuchwephesha, kwaye uya ku-22-2, 16 KOs.
UShakur Stevenson uyeka uJamel Hering ngesihloko kunye neAtlanta yeekhadi ezingaphantsi	UMiguel Madueño woyisa uJose Luis Rodriguez kunye neziphumo ze "New Blood".
Figueroa, Foster, Torres & Parrilla Score KO's eNewark; UPerez uyaphumelela
UNajee Lopez woyisa uAnthony Hollaway ngefashoni ekhawulezayo eAtlanta